Who were Bengali, so called Rohingya?: မီဒီယာများသို့ ပေးစာ
မြန်မာဘာသာ အသံလွှင့်ဋ္ဌါနများ ( BBC- VOA -RFA- DVB )
ဂျာနယ်သတင်းဋ္ဌါနများ ( ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌါနနှင့်ဂျာနယ်၊ မိဇ္ဇိမသတင်းဋ္ဌါနနှင့်ဂျာနယ်၊ ၊နိရဉ္စရာသတင်းဋ္ဌါနနှင့်ဂျာနယ် )
ရခိုင်လူမျိုး အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် သတင်းဋ္ဌါနများ။
လေးစားစွာဖြင့် ။ ။ သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ပေါ်လီစီများကို အတည်ပြုချက် မယူဘဲ မခိုင်လုံသည့် သတင်းများ၊ အင်တာဗျူးများ၊ အာဘော်များကို ထုတ်လွှင့်ခြင်း နှင့် ရေးသားခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါရန်ယနေ့အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် - ၂၀၁၁- နေ့ တွင် ဘီဘီစီ အသံလွှင့်ဋ္ဌါန မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှ ညနေ ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်၌ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ သော သတင်းများ၌ သတင်းများကို ကြားကြရပါပြီ ။ ယင်းသတင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်သန်းကို မေးမြန်းရာ၌ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော လူမျိုးများ မရှိကြောင်း အတိအလင်း အတည်ပြုပြောဆိုသွားပါသည်။
ဦးမောင်မောင်သန်းမှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှုး ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ည်သည့်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများနှင့် လူမျိုးစုနွယ်များက မည်မျှ ရှိသည်ကို သိရှိထားသော တာဝန်ရှိအစိုးရအဆင့်မြင့်အရာရှိဖြစ်ပါသည်။
သို့ အတူ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ရီမှလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၃၅ ) မျိုး ရှိကြောင်း ကြေညာ ထားခဲ့ ပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ ဒုဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးတင်ဦးကလည်း ယင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အသက်(၈၅ ) နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်သော ဦးတင်ဦးမှာ ယင်းသို့ ပြောဆိုခဲ့ ၍ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခြင်း ခံနေရပါသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရများမှ ယခုကဲ့ သို့မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အကြောင်းကို တိတိကျကျ ဖေါ်ပြရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်ခြင်းကိုလည်း မီဒီယာများမှ သိရှိပြီး ဖြစ်ကြပါသည် ။ သို့ သော် ၈၈-အရေးအခင်းဖြစ်လာပြီးနောက် စစ်အစိုးရ၏ လမ်းဘေးမြောင်းပုပ်မှ အနံ့ ဆိုး နံခြင်းလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ မကောင်းလို့လူ့ခွင့်အရေးချိုး ဖေါက်ခြင်းခံရခြင်းဆိုပြီး မီဒီယာတွေက လုပ်လာသောအခါ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံနေရပါသည်ဟု ဆိုသောသတင်းများမှာ ခေတ်စားလာပါတော့သည်။
ယင်းသို့ ခေတ်စားလာရာမှာ ယခုလို သမိုင်းလိမ်သော ပြသနာက ထိပ်ဆုံးမှသိမသာနှင့် နေရာဝင်ယူလာ
ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည် ။မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ အသံလွှင့်သတင်းဋ္ဌါနများနှင့် ဂျာနယ်မီဒီယာများအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် တင်းထုတ်ပြန်ရေးသား လွှင့်ထုတ်ဖြန့် ချီကြလျှင် အထူးသတိပြုစရာ အချက်တခုကို တိတိ ကျကျ ဆောင်၇ွက်ကြရန်လိုပါသည်။ ယခင်က လွှင့်ထုတ်ခဲ့ သော သမိုင်းလိမ်လူမျိုးများ၏ အင်တာဗျူးများ ၊ သတင်းများ၊ အာဘော်များကို ဆက်လက် မလွှင့်ထုတ်ရန်နှင့် ရေးသားခြင်းမပြုကြရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ယနေ့ကြားလိုက်ရသော ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း သတင်းဋ္ဌါနမှ သတင်းသည် သက်ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ တာဝန်ရှိအဆင့်မြင့် အရာရှိမှ အစိုးရ၏ ပေါ်လစီသတင်းကို ကြေညာခြင်း ဖြစ်ရာ ယင်းသတင်းကို အတည်ပြုထုတ်လွှင့်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည် ။ သတင်းဋ္ဌါနများနှင့် ဂျာနယ်မီဒီယာများသည် ယခုကဲ့ သို့သတင်းအရင်းအမြစ်များကို အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှ ရေးသားထုတ်လွှင့်ရန် သာ လိုအပ်ပါသည် ။သို့ ဖြစ်ပါ၍ ခိုင်လုံသော သတင်းအရင်းအမြစ် မရှိသည်များကို အတည်ပြုချက်များ မပြုလုပ်ဘဲ နောက်နောက် ထုတ်လွှင့်ခြင်း ၊ ရေးသားနေကြခြင်းများအား မပြုလုပ်မိကြစေရန် မိမိတို့ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့် ဘီဘီစီဋ္ဌါနကဲ့ သို့အတည်ပြုချက်ရယူပြီးမှ အခြားသော အသံလွှင့်ဋ္ဌါနများက ထုတ်လွှင့်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
Mail ထဲသို့ဝင်လာသော ပေးစာတစ်စောင်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 5:42 PM
ရိုဟင်ဂျာသတင်းကို ဧရာဝတီသတင်းဌာန၊ ဧရာဝတီblog၊ မဇ္ဇိမသတင်းဌာန၊ DVB အားလုံး ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး မဖေါ်ပြပါဘူး။
သတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အပေါ်သဘောထားကို ပြတ်ပြတ်သားသားမေးရပါတော့မယ်။ စစ်အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပဲ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ရဲ့ အရေးဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အပေါ် ဧရာဝတီသတင်းဌာန၊ မဇ္ဇိမသတင်းဌာန၊ DVB အားလုံး က ဒေါ်လာရဖို့ အတွက် ပင်းနေတာလား။ဘာလို့ သတင်းအနေနဲ့ မဖေါ်ပြပဲ သတင်းအမှောင်ချထားတာလဲ။ နားစေးနေတာလား။ ဒီလိုရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာန၊ မဇ္ဇိမသတင်းဌာန၊ DVB တို့ ရဲ့ရပ်တည်ချက်ဟာ ဒေါ်လာရဖို့ ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မူဆလင်ကို ရောင်းစားဖို့ ပဲ ဆိုတဲ့ BBC မြန်မာကကောင်တွေ၊ ကောင်မတွေ နဲ့ အတူတူပဲဆိုရင်တော့... ။
BBC ဟာ လူပါးဝ ပြီး လုံးဝမတောင်းပန်ပါဘူး။ ထို့ အတူတခြားနိုင်ငံခြားမြန်မာ သတင်းဌာနတွေဟာလည်း ဒီသတင်းတွေကို အမှောင်ချထားပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အားလုံးဟာ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စမှာ တကျိတ်တည်း ၊ တစ်သံတည်းလား။ ဖြေပါ။
BBC broke human right to our country... taking advantage to the unlucky conditions in which our country has been unstable in politics and consequently the country turned into the poor country and morality is almost corrupted and the whole government policy is quite bad... I wish we can save our country in time... it's never too late to start... let's join together..